Aza avela handiso fanantenana anao ny antontan'isa - Miasa ny fampiroboroboana ny viriosy | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 25, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Novakianao tamin'ity bilaogy ity fa ny marketing amin'ny Internet dia lalao mandroso. Na dia mitanjozotra matetika aza ny tsipika raha ny momba ny asa mafy sy paikady voatokana dia mbola misy fiverenana lehibe eo amin'ny paikady fampiroboroboana ny viriosy. Ny fananana sombin-javatra iray ao amin'ny bilaoginao na tranokalanao mahatratra olona iray taonina dia tsy manimba fotsiny ary avy eo manjavona, ho hitanao fa ny isan-jaton'ny fifamoivoizana dia misy ifandraisany ary mety tehina manodidina.
Raha ny zava-nitranga dia nanana an Infographic amin'ny pejy fitobiana miaingà ao amin'ny StumbleUpon iray volana lasa teo izay - azonao atao ny mahita ny tsipika etsy ambany. Ny vokany manaraka amin'ny statistika ankapobeny dia azo vinavinaina - tahan'ny fihenam-bidy nitombo, fifamofoana nihena, ary pejy isaky ny fitsidihana nihena tena lehibe mandritra ny spike.
Na izany aza, ny tsy tsapan'ny mpivarotra marobe dia ny fiantraikan'ny fampiroboroboana viriosy toy izao dia manome anao dingana lehibe amin'ny hetsika fitsidihana aorian'izay. Nomarihiko tao amin'ny Analytics tabilao etsy ambany. Ny tsipika mainty dia ny varavarankely 3 volana ankehitriny ary ny tsipika volondavenona maivana dia ny varavarankely 3 volana teo aloha nopetahany fampitahana.
Mariho ny fitomboan'ny isan'ny fifamoivoizana nijanona.
Ity no lakile! Mpivarotra maro no tia mahita fitomboana miadana sy mandeha amin'ny fomba fiasa (ataoko) ary tsy mieritreritra ireo zotram-pifamoivoizana ireo na inona na inona fa mahatonga aretin'andoha. Na izany aza, ny mpivarotra hafa dia miaiky tanteraka fa ny fidobohana an-taonina maro amin'ireo mpitsidika amin'ny alàlan'ny hetsika viral amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy, na fampiroboroboana lehibe, na fanamarihana amin'ny tranonkala iray lehibe kokoa dia handefa fitomboan'ny fifamoivoizana - fa maro amin'ireo mpitsidika hijanona. Amin'ity tranga ity dia tratra tamin'ny infographic mahafinaritra natolotro an'i StumbleUpon.
Raha manohy mampiroborobo votoaty mahafinaritra ianao izay mamokatra fika tahaka izao, dia mety manana tahan'ny fitsipahana mahatsiravina, fomba fijery pejy ary fandraisana andraikitra ianao - fa mbola ho mitombo ny mpihaino fototrao. Io mpihaino faka io is mpifamofo! Ny statistika dia manaloka fotsiny ny ankamaroan'ny mpitsidika tsy misy ifandraisany.
Ny fisondrotan'ny harenan'ireo mpitsidika mifandraika dia tsara amin'ny tranokalanao. Aza avela hanelingelina anao ny statistika!
25 Aogositra 2011 à 4:48
Lahatsoratra tsara, Doug. Nahatsikaritra zavatra mitovy amin'ny votoaty viralin'ny Slingshot SEO izahay. Toy izany koa ho an'ny haino aman-jery lehibe eto amintsika.